baaskiil Beeline dib u eegista qalabka navigation: madadaalo stress-lacag la'aan ah sahamiyayaal - Rule News
baaskiil Beeline dib u eegista qalabka navigation: madadaalo stress-lacag la'aan ah sahamiyayaal
Waa ay iska cadahay waxaa jira farqi ah non-GPS kexeeyey isdaba halkaas oo sahamin iyo wacyi-ka muhiimsan yahay wadada ugu hufan.
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “baaskiil Beeline dib u eegista qalabka navigation: madadaalo stress-lacag la'aan ah sahamiyayaal” waxaa qoray Alastair Jardine, waayo theguardian.com on Wednesday 25 November 2015 09.52 UTC
dib u eegida waxaa loo sameeyay iyadoo noocooda hore-yada ah ee ka Beeline, ku shaqeeya by guddiga ah arduino. hardware The final iyo app ay sabab u tahay in markab August 2016 eegi doonaa duwan.
Beeline waa qalab navigation wareegga in dadaweynaha aad tilmaamaha caadiga jeedin-by-jeedo fallaadha ah in had iyo jeer aad ku fiiqay in jihada saxda ah.
Bilaabay olole Kickstarter sida a, Beeline ma aha qalab GPS jeedin-by-jeedo sidii aad leedahay lahaa in baabuur, beddelkiisii ​​fudud muujinaysaa jihada of halka ugu dambeeysa. Waxay kuu siinayaa xoriyad badan oo ay halkaas ka heli adiga oo isticmaaleya isticmaale nouse. abuuray Its u wac "navigation haydh".
The noocooda Beeline, ku shaqeeya by Arduino ah oo ku xiran telefoonka ah Android. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Fikradda waa mid fudud. Beeline wuxuu isticmaalaa aad smartphone in la sameeyo inta badan gacma-culus: aad furaysto halka ugu dambeeysa galay app, iyo jihada iyo masaafada waxaa markaas muujiyey on qalab Beeline aasa in isteerinka aad ku.
app The final sidoo kale taageeri doonaa waypoints, jidaynayey isdaba more dabacsan via aad dukaan kafeega jecel. app ayaa waxaan soo qaatay wareejin ii tilmaami karaa oo keliya marka jihada of hal meel.
Fun iyo ka yar walaac ka jeedin-by-jeedin
dhibcood The arrow jihada of aad u socoto. Badhamada agagaarka shaashadda weecan doonta dhexeeya qaab iyo fursadaha, halka xirmado cad waa qayb ka mid ah noocooda ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Qalabka wuxuu u yahay puck yar oo madow, la xidhiidhka Bluetooth phone la isticmaalayo. Waxaa garab agagaarka isteerinka, oo uu leeyahay qaab-warqad e yar oo wareeg ah si ay u muujiyaan ah jihada iyo fogaanta si aad u socoto.
waxaa Isticmaalka badan xiiso badan qalab dhaqameed jeedin-by-jeedo GPS; waxay noqon kartaa xoogaa welwel ah oo ku saabsan baaskiil, iyo wadada qasac via wadooyinka gaar ahaan wareegga-daran. Waxay tahay oo ku saabsan oolnimada, ma sahaminta.
By si fudud ku fiiqaya at caga finalka aad, Beeline ku imparts dareen ee xorriyadda. Waxa uu dareensan yahay noole ku filan si aad u doonaa in aan la sii jeeda dhinaca qaldan muddo dheer. Oo ma jirin dareen in baqdintiisu idinku mararka qaarkood dareemaan muuji marka la isticmaalayo computer baaskiil GPS a. lacagta A dhinac oo kaliya oo muujinaysa jihada waa in aad ciidamada si ay dib-u-galaan hareeraysan aad, oo uu idin siinayo dareen xoog of meel.
Lahaanshaha seegay turnings badan oo computer ah baaskiil jeedin-by-jeedin, Waxaan la xaqiijin karin in ay yihiin xanuun a. Waxay inta badan qaataan in muddo ah in la aqoonsado aad off course tahay ka dibna weydii in aad duulayaa wadada. Marka aad go'aansatay in ay sameeyaan in, aad inta badan ku seegay Faroole la ugu fiican taasoo keentay in wareegga ah ee joojinta, sugaya in ay kor u qaadi, ka dibna qaadan mar kale u kacaysaa. Waa sirgaxan.
puck madow Small
The clips Beeline gal isteerinka via daboolka. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Mid ka mid ah dhinaca fiican ee hardware waa ay size (marka maraakiibta - xilligan waa abuuridda MacGyver-sida lug ah Arduino iyo batari USB ah). Waa yar ku filan oo ay ku hayay jeebka, boorso ama saddlebag a. Waxay noqon lahaa qalab aad u badan tahay lahaa doonayaan in ay isticmaalaan in ka badan aad smartphone loogu talagalay navigation, maxaa yeelay, ilaalinta screen aad telefoonka ee ku dila ay batari.
waxaa lifaaqaya iyo detaching waa ay fududahay sida ay jiraan qaybta ma ka tagay. noocooda lagu qabtay on via Koox madax caag in ku xiran Beeline in ay daboolka. Labada nabaraa inuu midba midka kale si ay u qabtaan isteerinka. Waxaa dareemay OK, laakiin samayn karo Hadba siday ahayd yara dabacsan. dabool ayaa lagu gagadin Wajigooda karaa in screen gaadiidka bac ama jeebka.
Beeline The waa laga heli karaa Kickstarter dhan £ 45, waxaana la filayaa in markab ee August 2016. A version tafaariiqda finalka ayaa la filayaa inay ku kacdo qiyaastii £ 60.
Waa ay iska cadahay waxaa jira farqi ah non-GPS kexeeyey isdaba halkaas oo sahamin iyo wacyi-ka muhiimsan yahay wadada ugu hufan. Xitaa ee gobolka noocooda ay, Beeline ahaa madadaalo in ay isticmaalaan, oo waxaan helay dhib yar in ay isticmaalaan badan nidaamka jeedin-by-jeedin dhaqameed.
Fikradda waa codka kuwa fuushiiyey magaalooyinka iyo qiyaastii aqoon meel ay u socoto, ama aad rabto dabacsanaan dheeraad ah oo ku sii jeeday. Waan arki doonaa waxa hardware ku eg mar qalab uu geeyey bishii August.
Iidooyinka: yar, light, fududahay in lifaaq, xorriyadda fardaha more, ma u dhac dib-u-isdaba, nolosha batteriga wanaagsan sababtoo ah screen-warqad e ah (in aragtida)
Arrrimaha: wuxuu u baahan yahay iyadoo la isticmaalayo madaxa aad halkii jiho ka Faydno waxa soo socda, Waxaa laga yaabaa in aan qaado wadada ugu hufan, taageero wax ku crowdfunding waa halis
Alastair Jardine, Qodobka, Crowdfunding, Baaskiil, Qalab, GPS, Kickstarter, Nolosha iyo style, Dib u eegida, Technology
← Apple dib u eegis TV: sanduuqa Streaming jiilka afaraad ee si buuxda ma dubay 30 fikradaha hadiyad Christmas carruurta casriga-bixio →